Adiga - run ahaantii - waxaad cunayso: waa tan sababta mustaqbalka nafaqada ay shaqsiyaad u noqon doonto - KU SAMEEYAAN JOOJI
ACCUEIL » kale Waxaad tahay - run ahaantii - waxaad cuntid: halkan waa sababta ay mustaqbalka nafaqada noqon doonto mid shakhsi ahaaneed
Waxaad tahay - runtii - waxaad cuntid: halkan waa sababta ay mustaqbalka nafaqadu noqon doonto mid shakhsi ahaaneed
Dadku way adag yihiin, waxaana jira waxyaabo badan oo saameeya caafimaadka. Qaar ka mid ah oo aynaan isbeddeli karin, sida da 'yarta ama qurxinta hidaha, iyo kuwa kale ee aan isbeddeli karno, sida doorashada nooca cuntada iyo cabitaanka.
Waxaa sidoo kale jira trillions of bakteeriyada ku nool ee mindhicirka - wada jirka loo yaqaan sida mikrobiome
- taas oo saameyn weyn ku leh caafimaadkaaga iyo dheef-shiidkeena.
Cuntada aan cunno waa isku dhaf ah nafaqooyin badan oo saameeya jidhka iyo microbiome siyaabo kala duwan, sidaa daraadeed ma fududa in la fahmo xiriirka ka dhexeeya cunto, metabolism iyo caafimaad. Daraasad cusub Jaamacadda Minnesota waxay ku dareysaa lakab kale oo adag. Waxay muujineysaa in cuntooyinka leh noocyada nafaqada ee la barbardhigi karo ay saameyn aad u kala duwan ku yeelan karaan mikrobiome.
Ku darso shan bilyan oo saaxiibo ah
Inkasta oo aanu ognahay in mikrobiom ka duwan oo badanaa yahay a calaamadeeynta caafimaadka mindhicirka waxaan fahamsanahay sida cunnadu u saameeyaan noocyada kala duwan ee microbial.
Daraasaddan cusubi, kooxda Minnesota waxay weydiisteen 34 mutadawiciin caafimaad qaba inay soo ururiyaan xog faahfaahsan oo ku saabsan wax kasta oo ay cuneen maalmo 17, iyagoo isbarbardhigaya macluumaadkan ku saabsan noocyada maadiga ah ee shaybaarka maalinlaha ah. . Inkasta oo inta badan ka qaybgalayaashu ay cuneen cuntooyin isku mid ah - kafeega, jiiska jiiska, digaag iyo karootada - doorashooyin dhowr ah ayaa u gaar ah.
Cilmi-baadhayaashu waxay ogaadeen inkasta oo ikhtiyaaraadka cuntada ee ka qaybgalaha uu saameeyeen mikrobiom u gaar ah, cuntooyinka qaarkood oo kordhaya ama yareynaya jiritaanka baakteeriyada, ma jirin isku xirnaan toos ah. Tusaale ahaan, digirta ayaa kordhay saamiga bakteeriyada qaar ka mid ah hal qof, laakiin waxay saameyn ku yeelatay mid kale.
Xiisad, xitaa inkastoo raashinka aadka u dhow (sida kaabajka iyo kan kale, sidoo kale loo yaqaanno kale) waxay u egtahay in ay saameyn isku mid ah ku yeelato mikrobiome, cuntooyinka aan la socon ee leh waxyaabo aad u kala duwan oo nafaqo leh ayaa leh saameyn la yaab leh oo kala duwan. Tani waxay noo sheegaysaa in calaamadaha nafaqada ee caadiga ah aysan aheyn habka ugu wanaagsan ee lagu xukumi karo in cuntada ay u eg tahay inay caafimaad qabto.
Natiijooyinka ayaa sidoo kale muujinaya in samaynta talooyinka cuntada ee lagu hagaajinayo mikrobiom aanay fududeyn. Waa inay noqdaan kuwo shakhsiyan ah iyada oo la tixgelinayo mishiinnada mindhicirka ee laga helo shakhsi ahaan iyo saameynta gaarka ah ee cuntooyinka qaarkood ay isaga ku jiraan.
Trillions of bakteeriyadu waxay ku nool yihiin calooshadayada.
Saamaynta ugu yar ee hidaha
Microbiome waa laga yaabaa mawduuc kulul ee hadda ah nafaqada iyo caafimaadka. Cilmi-baarayaashu waxay doonayaan in ay khariidad-galiyaan oo ay wax ka qabtaan asxaabta nooca bakteerigeena. Laakiin tani waa qayb ka mid ah kiiska.
Kooxdayda ka socota King's College London waxay iskaashi la leedahay cilmi baarayaal ka socda Isbitaalka Guud ee Massachusetts iyo shirkad lagu magacaabo ZOE oo hoggaamisa saadaaliyoDaraasadda ugu weyn ee sayniska ee nafaqada ee nooca adduunka. Hadafka PREDICT waa in la ogaado dhammaan isbeddellada isdhexgalka ee saameynaya dareen-celinta shakhsiyadeed ee ku saabsan cuntada, gaar ahaan dusha sare ee sonkorta iyo dufanka dhiigga ee ku xiran muddada dheer ee miisaanka iyo cudurada kala duwan.
Waxaan bartay jawaabaha nafaqada ee nafaqadayaasha 1100 ee ku yaalla Boqortooyada Ingiriiska iyo Maraykanka, oo ay ka mid yihiin boqolaal labo labo mataano ah. Waxaan cabirnay sonkorta (glucose), insulin, dufan (triglycerides) iyo calaamado kale oo ka jawaabaya isku-darka cuntooyinka la cabbiray oo bilaash ah loo doortay muddo laba toddobaad ah. Waxaan sidoo kale qabteen macluumaad ku saabsan waxqabadka, hurdada, gaajada, niyadda, hidaha iyo dabcan, dabiiciga, isu-ururinta malaayiin xog ah.
ka natiijooyinka ugu horeeyaayaa lagu soo bandhigay kulamada Ururka Macaanka ee Diabeteska Maraykanka iyo Bulshada Maraykanka ee Nafaqada horaantii bishan, waxay abuurtay dhac weyn. Waxaanu ogaanay in shakhsiyadu ay leeyihiin cuntooyin kala duwan oo soo noqnoqda oo la saadaaliyo oo la saadaalin karo cuntooyinka kala duwan, iyada oo ku xiran sida loo kala qaado borotiinka, dufanka iyo carbohydrateka. Laakiin waxaa jiray kala duwanaansho weyn oo udhexeeya dadka (ilaa siddeed jeer), taas oo sababtay waxyeelo "celcelis" - xitaa mataano isku mid ah kuwaas oo dhammaan wadaagaan hidaha.
In ka yar 30% ee isbeddelka jawaabaha carbohydrate waxaa sabab u ah qurxinta hidaha iyo in ka yar 20% dufan. Si lama filaan ah, waxaa jiray xidhiidh yar oo u dhexeeya labadaba: isagoo jawaab u leh dufanka ma uusan saadaalinin in qofku noqon karo jawi wanaagsan ama jawaabo xun oo sonkor ah.
Waxaan sidoo kale ogaanay in labadii isku mid ah ay wadaagaan kaliya 37% ee microbes-ka. Tiradani wax yar baa ka sareysa marka la wadaago laba qof oo aan xidhiidh la lahayn, taas oo muujineysa saamaynta ugu yar ee hidaha.
Cuntada qofkastaa ma jirto
Dhammaanteen waxaan leennahay dhadhanka shakhsi ahaaneed iyo doorbidka marka ay timaado cuntada. Sidaa darteed waa arrin macquul ah in la yiraahdo in dheef-shiid kiimikaadaheena iyo jawaab-celinta cuntooyinka aan cunno ay tahay inay ka duwanaadaan. Hase yeeshee, dareenkan ayaa bilowday in lagu ansixiyo cilmi-baaris cilmiyeed, isagoo caddeeyey in qof walba uu yahay mid gaar ah oo aan jirin nidaam dhab ah oo u shaqeeya qof walba.
Cilmi-baaristaani waxay muujinaysaa haddii aad rabto inaad ogaato cuntooyinka ka shaqeeya dheef-shiid kiimikaad sarreeya, markaa waxaad u baahan tahay inaad ogaato jawaab-celintaada shakhsi ahaaneed - wax aan la saadaalin Karin baaritaano hidde ah oo sahlan.
Dabcan, waxaa jira farriin kor u qaadaya cunno caafimaad leh oo khuseeya qof walba, sida cunista fiyuusyo badan, sii kordhaya kala duwanaanta cuntooyinka ku salaysan dhirta, iyo yaraynta isticmaalka qalabka ultra-socodka. Laakiin farriinta xusuusta ah waa inaanay jirin wax aad cuni kartid oo u shaqeyneysa qof kasta, inkastoo aad sheegayso hagayaal cunto, hay'ado dawladeed iyo gurus soo jiidasho leh Instagram.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore http://theconversation.com/vous-etes-vraiment-ce-que-vous-mangez-voici-pourquoi-lavenir-de-la-nutrition-sera-tres-personnel-119633
Golaha Qaranka: Laba biilal ayaa la ansixiyay, Congressmen US
Hindiya: Waxaan fileynay India inay u adkeysan doonto cadaadiska Mareykanka: Zarif | Wararka Hindiya
7 Noofambar 30 17h2019 Wargeys - VIDEO
Ronaldo ayaa lasocday
0736 #GeekTalk Daily oo uu la socdo Martin Rechsteiner on OPPO, Google iyo Sigaarka Elektaroonigga ah - VIDEO